Tirada dadka laga saaro dalka oo sii korortay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tirada dadka laga saaro dalka oo sii korortay
La daabacay tisdag 23 juli 2013 kl 09.33
Mashruuca Reva oo si ba'an loo dhaleeceeyay ayaa u muuqda mid yeelanaya saameyn. Foto: Lars Hedelin/Scanpix.
Waxaa sii kordhay tirada dadka sida qasabka ah looga saaro dalka iyada oo mashruuc dowlada ay dejisay lana yiraahdo Reva ay ujeedadiisu tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan dalka looga saaro dadka magan gelyo doonka ah ee laga aqbali waayay codsiyadooda.
Tirada dadkan laga saarayo dalka ayaa sare u kacday 25 boqolkiiba. Tirada dadka la saaro ee magaaladda Stockholm ayaa wax xoogaa hoos u dhacday marka lala bar bar dhigo sanadkii hore halka tirdada dadka laga masaafuriyo dalka ee gobolada Västra Götaland iyo Skåne ay aad sare ugu kacday.
Mashruuca dowlada ee Reva ayaa ka bilowday gobolka Skåne sanadkii 2010-ka.
’Sanadkii 2012-ka, waxaan si qasab ah dalka kaga saarnay dad gaaraya 509 ruux oo ah qaxootiga loo diiday sharciga deganaanshaha sanadkana tirada waa ay sii kordheysaa,, ayay tiri Kristina Hallander Spångberg, oo ah madaxa booliska xaduudaha ee gobolka Skåne.
Hadafka cad ee dowlada ee ah in dad badan laga saaro dalka ayaa saammeyn muuqata waxa uu ku leedahay dadka sharciyada loo diiday ee nolosha dhuumaaleysiga ku jira ee jooga dalka, sida ay leedahay Marie-Louise Lundberg oo ah dhaqtarad cilmi nafsi madaxna kah urur la yiraahdo BUP oo fadhigiisu yahay magaaladda Malmö kaasi oo caawiya dadka waxyeelada ka soo gaarto dagaalada iyo jirdilka.
– Dadkan waa koox qaba wel wel aad u sarreeya, waxaana ka mid ah in aysan ku dhiiran karin in ay tegaan xarumaha qaabilaada qaxootiga waayo waxay ka baqayaan in bileyska uu halkaasi yimaado uuna ka kaxeysto, ayay tiri Marie-Louise.
Inkastoo qaboobihii aynu soo dhaafnay si aad loo dhaleeceeyay qorshe howleedka mashruuca dowlada ee REVA, sida baaritaanada kaararka aqoonsiga ee muuqaalka isirka ku saleysan ee booliska ka fuliyeen baraha laga raaco gaadiidka dadweynaha, ayaa haddana waxaa suuragashay in tiro badan oo ah dad ku dhuumanayay dalka dhexdiisa in si qasab ah looga saaro.
Dowlada ayaa dhankeeda waxay dalbaneysaa in la dar dar geliyo lana sii kordhiyo sanadkan dal ka saarida qasabka ah ee dadka aan laga aqbalin codsiyadooda magan gelyo.